musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts Inotungamira Kufamba neZororo Simbiso
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Shangu Zororo Kuvimbiswa
Sandals Resorts International (SRI), kambani yemubereki yeCaribbean inotungamira yakasarudzika ese-anosanganisira nzvimbo dzekushambadzira Sandals Resorts neBeaches Resorts, yakazivisa kuunzwa kweSandals Vacation Assurance, chirongwa cheindasitiri chakazara kwazvo chekuchengetedza zororo chine indasitiri-yekutanga vimbiso yemahara. kutsiva zororo kusanganisira nendege yevaenzi yakakanganiswa neCOVID-19 zvinokanganisa mafambiro.
Vashanyi veSandals Resorts uye Mahombekombe Resorts vanogona kutora kusagadzikana-kusununguka nechengetedzwa nendege nyowani, rwendo rwemahara rutsigiro rwezvisingatarisirwe, uye nezvimwe.
Chirongwa ichi chinotora kunetseka kunze kwekufamba uye ichivimbisa vashanyi yavo yekufambisa mari yakachengeteka.
Izvozvi uye zvitsva zvekuchengetedza zvakaitwa izvozvi kusvika Zvita 31, 2021, zvekufamba kusvika Zvita 31, 2022, zvinongo gamuchira Sandals neBeaches Vacation Assurance Kudzivirirwa pasina muripo.
Sekureva kwaSRI Executive Sachigaro Adam Stewart, iyo nyowani yeSandals Vacation Assurance Chirongwa chakagadzirirwa kubvisa kunetseka kubva parwendo, zvichipa vashanyi chokwadi chekuti mari yavo zororo rezvese-rinosanganisira zororo inochengetedzwa kubva mukukanganiswa kunze kwekutonga kwavo.
“Tinoda kuisa kunakidzwa uye mufaro wekuronga uye kutarisira zororo rakanaka zvakare mukufamba. Kunyangwe isu tichiziva kunetseka chaiko kunogona kunetsa vaenzi vedu, tiri kutora matanho anoshamisa kubvisa kunetseka kubva kuquation, saka vafambi vanogona kunakidzwa nerwendo rwese rwekufamba - kubva pakubhuka kusvika pakuenda, ”akadaro Stewart.
Zvese zviripo uye zvitsva zvekuchengetedzwa zvakaitwa izvozvi kusvika Zvita 31, 2021, zvekufamba kusvika Zvita 31, 2022, zvinobva zvagashira maSandals neBeach Vacation Assurance Kudzivirirwa pasina muripo.
Kubatsirwa kweSandals uye Beaches Zororo Rekuvimbiswa Chirongwa: